अरुणलाई पछ्याउँदा	डा. हर्क गुरुङले लेख्नुभएका लेखहरुको संकलन भएको “विषय विविध” किताबका लेखहरु माझ एउटा लेख छ, “अरुण भएर झर्दा” । “अरुण भएर झर्दा” एउटा नियात्रा हो । तर यस नियात्रामा यात्रा वर्ण्र्ा त छदै छ, त्यसमा पनि अरुण क्षेत्रको इतिहास, भैगोलिक क्षेत्रको व्यख्या, त्यहाँका सामाजको जनकारी र विकास क्रम च्वाट्ट चटनी चखाई दिएका छन् डा. हर्कले । म त्यस क्षेत्रको ज्ञाता नभएता पनि उहाँले हिड्नुभएको ठाउँको नक्सा कोर्नुभएको रहेछ र यसो नक्सा नियालेर हेरेको त मैले पनि त्यस क्षेत्रको कुनै कुनै ठाउँमा खुट्टा पुगेको रहेछ । त्यसपछि त उनी जताजता जानुहुन्थ्यो म पनि त्यतै पुग्ने कोशिश गर्थे, अरुणलाई पछ्याउदै । उनले अरुणको किनारबाट हिडेको बयान गर्दा मैले आकाशबाट देखेको विशाल निलो अरुणलाई लेख्न थाले । उनले किराती शव्दमा खुवा वा कोशी शव्दले खोला भन्ने जनाउँछ भन्दा ए, नयाँ कुरा थाहा पाए जस्तो लाग्यो । उनले त्यस क्षेत्रमा दश याकथुम्बा प्रमुखहरुको गठबन्धन शासन, किरातीहरुले गरेका लर्डाई, विजयपुर, सागुरी गढी र रोङगाली जसलाई अहिले रंगेली भनिन्छ त्यस्ता जस्ता ऐतिहासिक कुराहरुको बयानका साथै श्रीजुङहाङलाई निसाममाङ -विद्याकी देवी) को अवतार भई प्राप्त गरेको किरात लिपि -जसलाई आजकाल सिरिजंगा लिपिको नामले चिनिन्छ) को किम्बदन्तीलाई समेत यस लेखमा राखेका रहेछन् । उनले यसै लेखमा लिम्बू सेनापति काङ्सो रेय र गोर्खाली सेनापति रघु राना बीचको लर्डाई अनि सन् १७७४ मा -र्गोखाली र किरातीहरुलाई गरेको कपटपर्ूण्ा संझौताको बयान सम्म पनि उल्लेख गरेका छन् । लेख पढ्दा पढ्दै म इतिहासको पानामा कतै लुकेको काङ्सो रेयको बारेमा सोच्न थाले जुन हामीले स्कूलको इतिहासमा कतै पनि फेला पारेका थिएनौ । त्यत्तिकैमा किरात याक्थुङ चुम्लुङले गरेको छलफलमा देखेको कुमार लिङदेनलाई झल्यास्स सम्झन पुगे । उनलाई त्यहाँ भएका अन्य लिम्बूहरुले काङ्सोरेको उपाधि दिईरहेका थिए । उनले लिम्बूवान स्वशासनको लागि लिम्बूवान क्षेत्रबाट आन्दोलनको थालनी गरेको कारण उनलाई योद्धा काङ्सो रेयसंग तुलना गरिएको रहेछ ।
पख्रिबास हुँदै हिलेबाट डा. हर्क आफ्ना सहयोगीसंग आनन्दले धनकुटा र्झछन् । हिलेबाट धनकुटा झर्दा उनले खुट्टा दुखाउनु परेको थियो भने । मैले खुट्टा दर्ुखई रहनुपर्ने अवस्था थिएन किनभने म त्यहाँ पुग्दा बस सेवा पुगिसकेको थियो । धनकुटा पुग्नेबेलामा उनले एउटा सल्लाको जंगलको बारेमा बयान गरेका छन् । त्यहाँको दरवारका बारेमा पनि कुरा गरेका छन् । मैले त्यो दरवार घुम्न नपाए पनि त्यही बाटो भएर हिड्ने मौका भने पाएको छु र त्यहाँबाट उनले घनकुटा आएर विसाएको चौतारीमा बस्न पनि पाएको रहेछु । त्यस ठूलो चौतारोमा बटुवाहरु भात पकाई खाएको उनले देखेका रहेछन् । तर अहिले त्यहाँ आउने चौतारोमा भात पकाउनु पर्दैन किनभने चौतारो छेऊमै दर्ुइटा होटल र पश्चिमा शैलीको एउटा रेष्टुरेन्ट छ । त्यस रेष्टुरेन्टमा पाश्चात्य शैलीको खानेकुरा पाइन्छ र हरेक विहिबार कर्न्र्सट पनि हुने गर्छ । त्यस कर्न्र्सटमा त्यहाँका स्थानीय युवाहरुले गीत गाउने गर्दा रहेछन् । त्यस किसिमको संस्कृतिको विकास हुनुमा गैरसरकारी संस्था र त्यहाँ काम आउने विदेशी स्वयंसेवकहरुको पनि देन रहेछ । घनकुटा बजारमा विहिबारे हाट लाग्ने गर्छ जुन डा. हर्कले घुम्ने बेलामा पनि लाग्ने गर्दो रहेछ । पेरेङ्गेामा सुंगुरका पाठा बेच्न ल्याउने गरेकोले त्यहाँ किरातीहरुको बसोबास धेरै छ भन्ने आकडा उहाँले गर्नुभएको छ लेखमा । अहिले पनि त्यस बजारमा धेरै परिवर्तन भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले पनि त्यहि कोप्चे बजार कै छेऊमा हाट लाग्ने गर्छ वरपर गाउँका मान्छेहरु हार्टभर्न आउछन् ।
Author sirjanaPosted on जुलाई 15, 2010जुलाई 30, 2015Categories गन्थन मन्थन, people and places	1 thought on “अरुणलाई पछ्याउँदा”	Bhawani Mangmu भन्नुहुन्छ:	जुलाई 17, 2010 मा 10:54 बिहान	Thanksalot Sirinaja Sister! For analysis of article and sharing to point of view about the writer and historical, cultural, geographical feature and economics status for east Nepal. Beside some fundamental matter also given for the Limbuwan, it will be support to anatomy for limbuwan state.
Previous Previous post: Bloomअर्को Next post: Limbus of Nepal in Number